Indlu yeeNdwendwe yaseSri Laxmi ilungele iintsapho! 4 ukuya ku6 - I-Airbnb
Indlu yeeNdwendwe yaseSri Laxmi ilungele iintsapho! 4 ukuya ku6
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguChamu
Indawo egqibeleleyo eKumbakonam kwiintsapho kunye nabo badala. Indawo ifikeleleka lula kwaye inamagumbi amakhulu. Umniniyo akahlali ngoko uya kuba nemfihlo. Kukho igumbi eliphezulu eligcinelwe umniniyo kwaye uya kuba phantsi. Kukho umgcini wendlu ogama lingu Nagu onokuhoya naziphi na iimfuno zakho . Indlu ikufuphi neetempile kunye nesixeko. Ukuba ufuna imifanekiso engakumbi yiya kwiwebhusayithi yethu: http://www.kumbakonamcomfortstay.com/index.html. Siyathemba ukuba uyakonwabela ukuhlala kwakho!
Indlu yi-bungalow enkulu kakhulu ezimeleyo ekufutshane ne-3000 sq ft, inamagumbi okulala amabini anamagumbi okuhlambela ancanyathiselweyo. Undwendwe lunokufikelela kuwo wonke umgangatho ophantsi obandakanya igumbi lokuhlala, igumbi elikhulu losapho indawo eninzi yokugcina imithwalo, ikhitshi kunye negumbi lokutyela elinefriji! Undwendwe lwethu lunemfihlo 💯. Xa ubhukisha, nguwe kuphela usapho oluhlala apho! Umgcini wendlu yethu uhlala apho iiyure ezimbalwa ngexesha losuku. Iimfuno zeendwendwe zethu ziyahluka kumaxesha ngamaxesha.
4.43 · Izimvo eziyi-35
Indawo entle kakhulu ebekwe ngasemva kwesikhululo samapolisa saseTaluk. Uninzi lweetempile eziphambili zingaphantsi kwe-5 min kude. Kananjalo unokufikelela kwi-swamimalai, kwindlela yaseDaraswaram ngokulula kunye nendlela enkulu yeTanjore!
Umbuki zindwendwe ngu- Chamu
Ngokuqhelekileyo sithanda ukuqhuba oku njengeqonga lika-Airbnb kungekhona njengehotele. Nagu umgcini wendlu yethu hlala apho ngezidingo zakho ngexesha lasemini.akazukuhlala apho ngamaxesha obusuku. Iindwendwe zinokutshixa ngaphakathi kwaye iNagu iya kubakho ixesha ofuna ukuza ngalo kusasa ukuze ujonge iimfuno.
Ngokuqhelekileyo sithanda ukuqhuba oku njengeqonga lika-Airbnb kungekhona njengehotele. Nagu umgcini wendlu yethu hlala apho ngezidingo zakho ngexesha lasemini.akazukuhlala apho ng…